ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ နဲ့ အမိုက်စား လေကျင့်ခန်း တွေ လိုက်နေ တဲ့ ခေးလု (ခေါ်) လုလုအောင်! – Shwe Sar
ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ နဲ့ အမိုက်စား လေကျင့်ခန်း တွေ လိုက်နေ တဲ့ ခေးလု (ခေါ်) လုလုအောင်!
By Shwe S NPosted on November 1, 2021
မော်ဒယ် လုလုအောင်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကို အခိုင်အမာ ရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်လျက် ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။မိန်းကလေး တိုင်းအားကျရတဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ရရှိ ပိုင်ဆိုင် ထားနို င်ခဲ့တဲ့ သူမ ကတော့ ယခု မှာ အနုပညာအလုပ်တွေအနေနဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ရိုက်ကူး လျက်ရှိနေကာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်ထက် တင်ပေးလေ့ရှိသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။
ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုး နဲ့ ခေးလုကြီးလို့ ခေါ်နေကြ တဲ့ သူမ ကတော့ ယခု မှာ လူမှု ကွန်ယက်ထက် ကို သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ မတင်တာကြာပြီဖြစ်ပြီးလွမ်းနေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် အထာကျကျလေးလန်းနေတဲ့ အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိလှပနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ကို ချပြလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။
သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်း တဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ လှပနေ တဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ ဟာ ပရိသတ်တွေကို ကြွေစေ ခဲ့ပြီး အချစ်တွေလည်း ပိုစေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ချစ်ပရိသတ်တွေ အတွက် မော်ဒယ် လုလုအောင် ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်း တဲ့ အပြုံးလေးတွေနဲ့ လှပနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ကို ပြန်လညေ် ဖ်ာပြပေး လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျ။
Photo credit Lulu aung ‘s facebook page
Previous post အဆီပို မရှိ ဆက်ဆီကျ မျက်ဝန်း အလှတွေ ကိုဖော်ပြလိုက် တဲ့ ယွန်းမီမီကျော်ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်များ
Next post မိမိုက်လွန်း တဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့ အရမ် လှလွန်း တဲ့ မေပန်းချီ